Beach hand-ball – «Mondial U-17» : hatao ny volana jolay any Maorisy | NewsMada
Beach hand-ball – «Mondial U-17» : hatao ny volana jolay any Maorisy
Hotanterahina aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina, ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany amin’ny taranja hand-ball, lalaovina amin’ny tora-pasika, sokajy zandriny.
Fantatra izao fa hatao atsy amin’ny Nosy Maorisy ny 11 ka hatramin’ny 16 jolay 2017, ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany amin’ny beach hand-ball, na ny hand-ball lalaovina eny ambony tora-pasika, ho an’ny sokajy zandriny U17, lahy sy vavy. Hanana ny lanjany io fihaonana io satria hiadian-toerana amin’ny lalao Olympika ho an’ny tanora, hatao any Arzantina ny taona 2018.
Araka ny fantatra, hatao ny 22 aprily amin’io taona ho avy io ny antsapaka ho an’ireo firenena iray vondrona. Io no fantatra, nandritra ny fandalovan’ilay Italianina, Giampero Masi sy ilay Tiorka, Burak Teczan, tomponandraikitra avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena, ny herinandro lasa teo.
Marihina fa hahatratra 500 ireo vahiny hanatrika izany, ka tafiditra ao anatin’izany, ireo mpilalao sy mpitantana ary mpitsara. Raha tsy misy ny fiovana, hanomboka ny 6 jolay, ny fandraisana ireo delegasiona rehetra.
Manomana mafy ny Maorisianina
Mandra-piandry izany, mbola ao anatin’ny fanomanana tanteraka ny tomponandraikitra Maorisianina. Anisan’izany, ny hotely hampiantranoana ireo firenena samy hafa, ny fanamboarana ny fotodrafitrasa, ny fandriampahalemana sy ny sisa. Efa nanome toky tamin’ny federasiona iraisam-pirenena ny Maorisianina fa afaka hampiantrano tsara ity fifaninanana ity.
Marihina fa taranja mety ho an’ny Malagasy ny beach hand-ball, izay tsy mila fandaniam-bola be sady tsy ilaina mpilalao betsaka. Azo antoka fa ho voafehin’ny mpilalao Malagasy ity taranja ity, toy ny beach soccer sy ny beach volley, izay efa samy nitondran’ny ekipam-pirenena, amboara avokoa.
Efa nisy telo taona lasa izay, ny fampahafantarana sy fanandramana nataon’ny fikambanana iray, ity taranja ity izay nanangana kianja tetsy Mahamasina saingy tsy nisy tohiny ka maty momoka.